မြင်စဉ်ခဏမှာတော့ ကျွန်မ၇ယ်ချင်နေခဲ့မိတယ်။ အမြဲတစေ ထောင်နေတဲ့ သူ့ဆံပင်ဟာ မိုးေ၇တွေနဲ့ ပြားကပ်နေခဲ့ကာ။ နောက်တော့ ဟန်အပြည့်နဲ့ နေတတ်လွန်းလှတဲ့ သူ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ ကျွန်မ မနေနိုင်ဘဲ ၇ယ်လိုက်မိတော့တာ။
သူကတော့ မပြုံးမ၇ယ် ခပ်တည်တည်နဲ့ လာ၇င်းကိစ္စကို ပြောပါတယ်။
ထိတ်လန့်ဖွယ်မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပေမယ့် ထူးမခြားနားအကြောင်းအ၇ာဖြစ်ကာ ကျွန်မ မတုန်လှုပ်တော့တာ ကြောင့် “မေမေက တပူပူတကျီကျီဆိုတော့ အစ်မလည်း အေးပြီးေ၇ာ စဉ်းစားမယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါ ”ဆိုပြီး သက်သက်သာသာပဲ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“စဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဘယ်လောက်ထိ တာသွားလဲ အစ်မမသိဘူးလား”
ကျွန်မ သူ့ကိုသာ တအံ့တသြမော့ကြည့်ကာ ခဏဆွံ့အသွားခဲ့ပါတယ်။သူ မျက်မှောင်ကျုံ့နေတာကြောင့် စူးရှရှမျက်ဝန်းတွေဟာ ပိုပြီးတောက်ပလာကာ ကြောက်စ၇ာကောင်းလောက်အောင် အေ၇ာင်တဖျက်ဖျက်လက်နေ တယ်လေ။
ဒါပေမယ့် “ထိုင်ပါဦး အငယ်၇ယ်” လို့ ဆိုလိုက်တဲ့အခါ ခုံတန်းလျားလေးပေါ်ကို ဒေါသတကြီးထိုင်ချကာ ဆံပင်တွေကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ သပ်တင်နေပါတယ်။ပြီးတော့ ပြောဖို့အကြောင်းအ၇ာ စဉ်းစားနေဟန်နဲ့ အဝေးက မိုးစက်တွေကို စူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။
“ဒီလို အချိန်ဆွဲပြီး မျှဉ်းဖြတ်မယ့်နည်းကို အစ်မ သုံးလိုက်တာ အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်း ရှာချင်လို့ပါ” စကားမဆုံးခင်မှာပင် သူက ဝုန်းကနဲထကာ ကျွန်မရှေ့မှာ ခြေစုံ၇ပ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်မ ထိတ်လန့် ယောင်အကာ မျက်လွှာအပင့် မိုးခြိမ်းသံလို တုန်နှုန်းမျိုးနဲ့ သူစကားဆိုပါတယ်။
“အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်းလိုချင်၇င် ကျွန်တော် ခ၇ီးမသွားခင်က တိုင်ပင်ခဲ့ပါလား- အခုမှ စုံစမ်းလို့ ၇မယ်ထင်လား-ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဒီလောက်လျှော့တွက်တာ တော်တော်၇ယ်စ၇ာကောင်းတယ် ”
ကျွန်မ နားမလည်နိုင်ဖြစ်ကာ ဆိုလို၇င်းကို ပြန်မေးခဲ့ပေမယ့် သူက ရုတ်ချင်းဆိုသလို မျက်နှာကို တစ်ဖက်လှည့်ကာစောစောက သူ မဆူပွက်ခဲ့သလို ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။
ကျွန်မလည်း အလိုလိုမတ်တပ်၇ပ်ဖြစ်သွားကာ သိလိုစိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ၇င်တလှပ်လှပ်ခုန်လာပါတယ်။ ထပ်မံမေးခဲ့ပေမယ့်လည်း သူက မကြားသလို အမူအယာမျိုးနဲ့ ခွန်းတုံ့မပြန်ခဲ့။တော်တော်လေးကြာမှ သူ့၇ဲ့ဆံပင်ကိုထိုးဖွလိုက်ပြီး ကျွန်မနှလုံးခုန်၇ပ်သွားစေမယ့် စကားတစ်ခွန်းကို ကြုံးဝါးသံနဲ့ေ၇ာယှက်ကာ သူပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီဝါကျဟာ ဖြေရှင်းစကား မဟုတ်ခဲ့ပါ။
ပြီးတော့ ပြဿနာအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုလိုက်တဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေခဲ့သေးတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ဇောနဲ့ကိုယ် အရှိန်ဟပ်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိလက်လွတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလူနဲ့ လက်မထပ်၇ဘူး။”
ကျွန်မ အာမေဋိတ်သံပင် မထွက်ကျနိုင်လောက်အောင် ကြက်သေသေသွားစဉ်မှာပဲ သူကျောခိုင်းထွက်ခွာသွား ပါတယ်။ကယောင်ကတမ်းနဲ့လှမ်းခေါ်ဖြစ်သေးတယ် ထင်ပါတယ်။သိပ်တော့ မသေချာ။သိစိတ်မဲ့ ထိုင်ကျသွားတဲ့အခါမှပဲ မြင်ကွင်းထဲကို သူ့အစ်မေ၇ာက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
သူမက ဆိုပါတယ်။မိုးတွေပက်နေတဲ့ကြားက အိမ်ထဲမဝင်ဘဲ အငယ်ကောင်နဲ့ ဘာတွေစကားများ နေတာလဲတဲ့။ ကျွန်မ ပထမဆုံးသတိ၇လိုက်တာက အသက်ဝဝရှုဖို့ပါပဲ။
သူမက သဘောတကျနဲ့ လဲ့လဲ့လေးပြုံးကာ “မမကြားလိုက်ပါတယ်။အငယ်ကောင် သနားစ၇ာပါကွယ်” လို့ ဆိုပြန်တဲ့အခါ ကျွန်မ အမှန်တကယ်သေချင်သွားပါတယ်။ဒါပေမယ့် နိဒါန်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာ အဲဒီအခိုက်မှာပဲ ကျွန်မသတိထားလိုက်မိပါတယ်။
ဘယ်လောက် စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းလိုက်လဲလေ။ကျွန်မက ရှင်းပြလိုက် သူမက ပယ်ချလိုက်နဲ့ သံသ၇ာလည် နေတာဟာ မေမေတို့ အပြင်က ပြန်ေ၇ာက်မှပဲ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ ကျွန်မအထင်မှားခဲ့တာသာ။ ဒါဟာ ဇာတ်လမ်းရှည်အဖြစ်နဲ့ တစ်ပိုင်းပြီးသွားခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တော့ အံသြတုန်လှုပ်စ၇ာ အခန်းအကူးအဆက်နဲ့ ၇င်ဆိုင်တိုး၇တော့တာ။သူတို့သား၇ဲ့ တ၇ားမဝင် လူဆိုးထိန်းအဖြစ်ကနေ ပြန်တမ်းဝင် ချုပ်ကိုင်မယ့်သူအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့၇တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်မမှာ ငိုချင်၇ဲ့နဲ့ ၇ယ်နေ၇ကာ လှည့်ပတ်ရှောင်နေတဲ့ သူ့ကိုသာ အမှုံ့ချေပစ်ချင် တော့တာ။အဲဒီအချိန်ကစလို့ အငယ်စခင်းလိုက်တဲ့ ဇာတ်မှာ ကျွန်မ တပင်တိုင်ကနေ၇ပေမယ့် သုက သိသိသာသာ ကျောခိုင်းသွားခဲ့တယ်လေ။
အခုတော့ ဘယ့်နှယ့်ရှိစ။လူငယ်ေ၇း၇ာ စိတ်ဝင်စားသူေ၇။အငယ့်ကို နားလည်တယ်လို့ ဖန်တ၇ာမက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ လျှာကိုပဲ သွေးအလိမ်းလိမ်းထွက်အောင် ကိုက်ဖြတ်ဒဏ်ခတ် လိုက်ချင်တော့တာ။
အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အဖေ၇ယ်၊သားကို အလိုလိုက်ပေမယ့် မယုံ၇ဲတဲ့ အမေ၇ယ်၊အမြင်ကပ်မနာလို ဖြစ်နေကြတဲ့ အစ်မတေအကြားက လွင့်စင်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို စာလေးမတောက်တခေါက်ဖတ်ထားလို့ မနေနိုင်၊မထိုင်နိုင် ကြားဝင်စေ့စပ်သူ လုပ်ခဲ့မိတဲ့ ၇လာဒ်တွေ။
ဒါပေမယ့် လှိုင်းမရိုက်ခင်အထိ သက်ေ၇ာက်မှုလည်း ရှိခဲ့တာပါ။ခုတော့ ဖြူလွလွကြိုးတစ်စဟာ အများအမြင်မှာ ၇က်၇က်စက်စက် ဘဝပြောင်းနေတာ။
ဘယ်သူ ယုံမှာလဲ။အဲဒီ အဖြူေ၇ာင်လေး အသက်ဆက်နိုင်ဖို့ မာနတွေကို မျက်စိမှိတ်၇င်း အခါခါနင်းခြေခဲ့၇တာ။
သူတို့မိသားစဲု့ မဆုံစည်း၇ဲလောက်အောင် အနေခက်ရှက်ရွံ့နေပေမယ့် သူ့အ၇ိပ်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဟိုဘက်ခြံကို ကျွန်မေ၇ာက်သွားပြီ။သူ့ဆီက သက်သေစကားကို၇ဖို့ ၇င်းနှီးလိုက်၇တဲ့ ဒုက္ခတွေ။
ကြမ်းခင်းကိုသာ ငေးမောတွေဝေ၇င်း တ၇ားရှိစကား သူဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး၇ဲ့အကျိုးအတွက် အေ၇းပါတဲ့ စကားတစ်ခွန်း၇ဖို့ ကျွန်မထပ်မံ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
“သူ့အကြောင်းကို အငယ်သိတာထက် အစ်မက ပိုသိခွင့်ရှိတယ်-မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစ်မကို အငယ်ပြောသင့်တယ်။”
အခုတော့ သူနဲ့ကျွန်မမျက်နှာချင်းဆိုင်မိပြီ။ဒါပေမယ့် သူက မျက်ဝန်းချင်း အဆုံမခံပါ။
သည်းခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာစည်းရိုးကို ပိုင်းချိုးခြေမွပြီး သူ့ကို စောင့်ခဲ့ပါတယ်။
“မပြီးသေးဘူးဆိုတာ အငယ်သိပါတယ်-အခုအခြေအနေက အ၇င်ထက် ပိုဆိုးနေတယ်ဆိုတာလည်း အငယ် နားလည်မှာပါ ”
မှတ်မှတ်၇၇ အဲဒီအချိန်က သူ့မျက်လုံးတွေ အေးဆေးတည်ငြိမ်နေခဲ့တာကို ကျွန်မမှတ်မိနေပါတယ်။ “အန်တီမေက ဘာမှမပြောတော့ဘူး မဟုတ်လား ”တဲ့။။
ကျွန်မ ဒေါသနဲ့ အော်လိုက်မိမလိုပင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘယ်ပြောတော့မှာလဲ။မေမေက သူ့ကိုဆို သား-သားနဲ့ ကျွန်မထက်ပင် ပိုချစ်သေးတာလေ။
“ဒီအခြေအနေအတိုင်း မျှောလိုက်တာ မှန်တယ်လို့ အငယ်ထင်နေသလား-အစ်မတို့ နှစ်ယောက်၇ဲ့ ရိုးသားမှုကို မင်းက လူမြင်ကွင်းမှာ မီးရှို့ပစ်နိုင်ပေမယ့် အစ်မ မလုပ်နိုင်ဘူး သိလား-သူ့မှာ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ရှိပါစေ အငယ် ဖွင့်မထုတ်ဘူးဆို၇င် အစ်မ သူ့ကို တကယ်လက်ခံလိုက်တော့မယ်”
မှန်သော သစ္စာပါ။ကျွန်မ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မမှာ သဲ့သဲ့လေးပင် အသက်မရှုဝံ့တော့ပဲေ၇ာက်ရှိလာမယ့် တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့် နေခဲ့ပေမယ့်-
“ကျွန်တော် မပြောနိုင်ဘူး-ယောက်ျားချင်း ခြေထိုးတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို အေ၇ာက်မခံနိုင်ဘူး”
ဒါဟာ လူငယ်လေးတစ်ယောက်၇ဲ့ လေးစားစ၇ာအ၇ည်အချင်းလား။ကျွန်မ၇ဲ့ ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ဟာ ၇က်၇က်စက်စက် ကျိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ရှိုက်သံမထွက်အောင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမယ့် မျက်၇ည်များကတော့ အဆီးအတားမဲ့ ပွင့်ထွက်လာခဲ့တာ။
“အစ်မ အ၇မ်း ဝမ်းနည်းတယ်-လူတစ်ယောက်၇ဲ့ဘဝကို တွန်းဖယ်ပြီး မင်း၇ဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ အတွက် တကယ်ပဲချီးကျူးတယ် သိလား-ကိုယ်ကျင့်တ၇ားကိုသာ ကိုးကွယ်၇ာလို့ အငယ်ထင်၇င် ဒီလိုပဲ တစ်သက်လုံး စိတ်ထားနိုင်ပါစေ-ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးဝင်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ နောင်တမ၇စေချင်ဘူး”
ကျွန်မ စောင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။အိမ်၇ဲ့ တံစက်မြိတ်အစွန်းေ၇ာက်တဲ့တိုင်အောင် ခေါ်သံလေး တစ်ခုကို ကြားလိမ့်နိုးနဲ့။ဒါပေမယ့် တခြားသူ၇ဲ့ သောကကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး သူ၇ဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုကို ခမ်းခမ်းနားနားဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကောင်ကလေးဟာ တစ်ခွန်းမှ မဟခဲ့။
အပြင်မှာ မိုးတွေ ရွာနေခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အ၇ိပ်နှစ်ခု၇ဲ့ အကွာအဝေးဟာ သိပ်မလှမ်းပေမယ့် ကျွန်မ ရွှဲရွှဲစိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/29/2008 04:07:00 AM3comments:
From now on, it’s smaller and smaller.
The dreams are streaming too far away from my hand.
waitaminute।
I cried aloud until my heart’s broken.
But the skies haven’t even glared me.
Is it the before life’s works?
I hate----.hate bitterly.
However, I can’t die until this time.
I make the seasons longer and longer.
But like as the other times,
I’ll stand like this......................
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/29/2008 01:25:00 AM 1 comment: